Oromiyaa bakkeewwan rakkoon nageenyaa turetti qormaatni biyyaaleessa 'dheereffamuu danda'a' - BBC News Afaan Oromoo
Oromiyaa bakkeewwan rakkoon nageenyaa turetti qormaatni biyyaaleessa 'dheereffamuu danda'a'
Image copyright FEESBUUKII/MINISTERA BARNOOTAA
Goodayyaa suuraa Waajjira Ministeera Barnootaa Itoophiyaa
Naannoo Oromiyaa bakkeewwan jeequmsi turee fi barnootni addaan cite tureef yeroo jedhame keessatti yoo baratanii hin xumuran tahe, yeroon qormaata biyyaalessaa akka dheerachuu danda'u Itti Gaafatamaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr Tolaa Barisoo BBCtti himan.
Kutaalee Oromiyaa gara lixaa fi Kibba Naannoo Gujii dabalatee ji'a Fulbaanaa yeroo barnootni haalaan eegaluu qabu irraa kaasuun jeequmsi walitti fufinsaan gaggeeffamaa tureera.
Sababa waldhabdee daangaa Oromiyaa fi Naannoo Benishaagul giudduutti uumameen barnootni gama lamaaniin addaan cituu qofa osoo hin taane, jiraattootni kuma dhibbatti lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniiru.
Wallagga Bahaa keessa barattootni kumaatamaan lakkaa'aman sababa buqqatiidhaan barnoota addaan kutanii akka turan BBCtti himanii turan.
Maatii fi barattoota BBC'n kanaan dura dubbises sababa hanqina nyaataa fi uffataan manneetii barnoota naannoo kaampii isaanii jiran keessatti illee hordofuu akka hin dandeenye himaniiru.
Gariin ammoo bakkuma jiranitti barnoota isaanii itti fufaniiru. Haa tahu malee kun erga yeroon barnootaa darbee kan eegaledha.
Wallagga Arfan keessumaa Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu bakkeewwan tokko tokko keessattis akkasuma rakkoo nageenyaa tureen barnootni yeroo kaa'ameef keessati gaggeeffamaa hin turre.
Kunis barattotni qabxii gaarii akka hin galmeessineef asababa tahuu danda'a. Dr Tolaan bakkeewwan rakkoon nageenyaa tureefi barnoota isaanii yeroo karoorfame keessatti hin xumurreef qormaatni biyyaalessaa akka dheeraffamuu gochuu dandeenya jedhan.
Haa tahu malee bakkeewwan barnootni duubatti hafee jalqabetti yeroodhaan xumuruun akka danda'amuuf barnootni dabalataa barsiisotaan kennamaa jira jedhan.
Samistera jalqabaa irratti manneetiin barnootaa hedduun cufamanii turan kan jedhan Dr Tolaan boqonnaa samisteraa osoo hin fudhatiin akkasumas sanbata torbaniin barsiisotni deeggaruun barsiisaa turan jedhan.
Haa tahu malee haala barattootni kunneen irra gahan qorachuun erga adda baasnee qormaata kennuu fi dheeressuu keenya murteessina jedhan.
Bara darbes manneetii barnootaa akka Mooyyalee fa'atti rakkoo wal fakkaataan waan tureef yeroon dheerefamee qormaatni haaraan addatti akka qophaa'uuf murteessinee turre jedhan.
Goodayyaa suuraa Rakkoo nageenyaa tureen barnootni yeroo kaa'ameef keessati gaggeeffamaa hin turre.
Booda garuu barattootni yaada isaanii waan jijjiraniif yeroo kaa'ameef keessatti akka fudhatan taasifame jedhan.
Ammas ministera barnootaa waliin mari'achuun waan hojjennuuf haalotni nu dirqisiisan jiraannan yeroo isaa dheeressuun qormaatni qofaatti akka qophaa'u gochuu dandeenya jedhan.
Ministerri barnootaa qormaata wal fakkaataa hedduu qopheessa kan jedhan Dr Tolaan barattotni qormaatuma tokko fudhatanii wal dorgomuun gaarummaa qaba jedhanii rakkoo jiru furuuf garuu akka filannootti kan fayyadamnu yeroo isaa dheeressuun qormaata wal fakkataabiraa akka fudhatan gochuudha jedhan.
Haa tahu malee yeroo qormaataa dheeressuun kun akka biyyaatti osoo hin taane bakkeewwan rakkoon nageenyaa mudatee fi barnoota isaanii yeroodhaan xumuruu hin dandeenyeettidha jedhan.
'Bara kanas qabxii ol'aanaan akka galmaa'uuf hojjenna'
Bara darbe akka Itoophiyaatti qabxii ol'aanaan kan galmaa'e Oromiyaa keessatti waan taheef, bara kanas sanuma itti fufsiisuuf hojjechaa jirra jedhan Dr Tolaan. Kun qormaata biyyaalessaa kutaa 10 fi kutaa 12ffaa irrattidha.
Bara kanas qabxiin barattoota kanneenii akkamiin dhufe kan jedhu qoranneerra jedhanii bara kanas akkasuma qabxii olaanaa akka fidaniif bu'uuraan irratti hojjechaa jirra jedhan.
Barattootni mana barumsaa bultii addaa Oromiyaa bara kanas qabxii olaanaa akka fidaniif abdii qaban ibsaniiru. Dabalataan muuxannoo mana barumsichaa fudhachuun manneetii barnoota jiran irrattis bifa sadiin hojjechuu eegalleerra jedhan.
Kan jalqabaa godinaalee tokko tokko irraa barattoota cicimoo gidduu gala tokkotti walitti qabuun deeggarsi addaa taasifameefii akka baratan gochuu yoo tahu gama biraan ammo manuma barnootaa isaanii keessatti barattoota qabxii fooyya'aa qabanis filuun barnootni addatti akka kennamuuf taasisuudha jedhan Dr Tolaan.
Inni sadaffaan ammoo barattoota waliigalaafis barumsa dabalataa erga ji'oota sadii darbaniin as akka kennamu gochuu eeggalleera jedhan.
Barnoota dhaabuu barattootaa Yuunivarsiitii duuba maaltu jira?
Qabxii olaa'anaa galmeessuuf hojii yeroo dheeraa gafata kan jedhan Dr Tolaan barnoota dabalataa kennuun cinatti kitaaba barataa gahaa dhiyeessuu fi muuxannoo mana barnoota bultii addaa kan Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa babal'isuun fuulduraafis bu'aa olaanaa qaba jedhan.
Qulqullina barnootaa fooyyessuufis hojjechaa jirra kan jedhan Dr Tolaan barsiisotaafis wagga waggaatti qormaata gahumsaa kennaa jirra jedhan. Bara kana barsiisotni naannoo Oromiyaa kuma 40 ol qormaaticha fudhataniiru jedhan.
Teknoolojii wal'aansaa yaada gara dubbiitti geeddaru
'Akkamittiin barsiisaa cimaa addunyaa akkan ta'e'